Shina: Bolongana Tibetana Maromaro no Nakatona · Global Voices teny Malagasy
Shina: Bolongana Tibetana Maromaro no Nakatona
Voadika ny 02 Febroary 2012 8:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, Deutsch, বাংলা, English, Português, Español, Ελληνικά, English
Amin'ireo olona mandoro tena tao Tibet ho fanoherana ny fanjakazakan'ny fitondrana Sinoa, nikorontana tao Tibet tatsinana izay ahitana mpanao fihetsiketsehana voatifitry ny polisy ary nitombo be ny miaramila tonga tao an-toerana – tsy azo nidirana intsony androany ny bolongana mahaleo tena amin'ny teny Tibetana fanta-daza hita ao Shina.
Nakatona ny sampana bolongana tao amin'ny tranokala AmdoTibet (mandeha tsara kosa ireo tranokala hafa ambiny), hita ao ity fampitandremana manaraka ity:
Toy izao ny vakin'ity fampitandremana amin'ny teny Shinoa ity: “Noho ny mpamahana bolongana sasany mamoaka votoaty tsy mifanaraka amin'ny tanjon'ity tranokala ity, nakatona vonjimaika ny bolongana, antenainay fa tsapan'ny mpamaha bolongana izany!”
Bolongana hafa malaza Sangdhor.com no tsy azo nidirana ihany koa, tsy nisy fanazavana mihitsy ny momba izany. Tamin'ny volana Oktobra 2011, Sangdhor nirisika nandefa tononkalo mitondra ny lohateny hoe “Maraina” izay milaza momba ny fandoroan-tena tao Tibet. Vetivety foana anefa dia noesorina tao amin'ilay bolongana izany tononkalo izany. Navoaka tao amin'ny High Peaks Pure Earth kosa ny tononkalo nadika tamin'ny teny anglisy
Ity ambany ity , pikantsary tao amin'ny Sangdhor.com, mampiseho ny fomba fiasan'ny Sangdhor amin'ny tokony izy ny pikantsary eo ambony indrindra ary nalaina androany kosa ny pikantsary eo ambany:
Farany, tsy azo nidirana ihany koa ny bolongana Rangdrol.net nefa ahitana fanamarihana mahaliana mikasika ny Tibetana. Tamin'ny volana Oktobra 2011, Rangdrol namoaka tononkalo mitondra ny lohateny hoe “Ny Marina Momba ny Afo Tao amin'ny Lalàn-tsilo” izay miompana betsaka momba ny afo sy ny lelafo, noesorina ihany koa ny tononkalo, vakio ny dikateny amin'ny teny anglisy ao amin'ny High Peaks Pure Earth. Ity ambany ity pikantsary nalaina vao haingana tao amin'ny Rangdrol, ny teny anglisy “Toerana tsy an-tserasera” ” Bolongana tsy Azo Idirana” manamafy fa noesorin'ireo mpandrindra ny bolongana, ny lahatsoratra amin'ny teny Tibetana eto ambany kosa milaza hoe: “Amin'ny anaran'ny fiainana, misaona isika ary mitomany”.